Ireland's Whiskey Renaissance: Stuart Travels ukuze Galway
azithathe uStuart sika zakamuva global Irish Whiskey imvuselelo kanye Mecca okungukuthi Galway.
Nakuba Irish Whiskey kungokoqobo i imvuselelo emangalisayo global ukuthandwa futhi yokuthengisa, umuzwa wami elishaqisayo liwukuthi kakhulu abantu abenza sivumele leli thuba babanike by kukhona Indawo yokudlela futhi Pub abanikazi emuva ekhaya e-Ireland.
Ngonyaka odlule I egqanyisiwe ithuba elikhulu abanikazi zokudlela Ireland premium ukuze bathuthukise isipiliyoni banikela amadina abo esihle ngokubeka ukunakekelwa kakhulu ku kokuthandana Irish ohlwini Whisky njengoba benza ohlwini yabo iwayini. Saze ahlinzekwa ukusiza iphrojekthi umshayeli nge onganikezwa € 250 izimali ifaniswe nezeluleko ukhululekile yokudlela lokuqala Irish wokudala i-premium Irish Whiskey ohlwini for amadina abo. Naphezu ukuthinta Irish Indawo yokudlela Association ne umqondo wethu, ithuba lidlule ongaceli.
Okuhlangenwe nakho kwami ​​imigoqo kanye ezinkantini lapha e-Ireland ubelokhu kangcono kancane. Ulwazi olujwayelekile mayelana Whisky Irish Brands izinhlobo namasiko phakathi Irish ibha abasebenzi kuyinto mpofu ngempela ngokwezinto phezu kwakho konke. Phakathi nohambo lwami njalo nxazonke Ireland, kusobala ngempela kimi ukuthi iningi ibha abasebenzi kule ezinkantini of Dublin enkudlwana Ireland banolwazi oluncane kakhulu noma ukuqonda nogologo Irish. ngokuvamile, abazi umehluko phakathi Scotch, Bourbon noma Whisky Irish. Okuzenzakalelayo ukukhonza nge ice futhi ezihlukahlukene izibuko kusuka yewayini kwabafana ubude ukuze brandy izibuko ngisho nengxenye pint izibuko. Engangikujwayele lokhu lapho ngangihlala Brussels ngonyaka odlule, kodwa e Dublin? Kuyinto esidumazayo ukusho okungenani.
Kodwa likhona ithemba nethemba iza kusukela West!
Ngokuhamba 200 edlule Galway wayengomunye walabo elichumayo nogologo Izikhumulo Ireland. Kodwa njengoba umgwaqo, ujantshi canal amanethiwekhi enwetshiwe kusukela Dublin ekuqaleni kuka izikhathi uVictoria, Galway nogologo Distilleries wahlupheka njengoba emikhulu Dublin asekelwe Scottish Distilleries ukuthonywa wanda kakhulu intshonalanga neningizimu.
Ukubheka ikhophi yami ye The Lost Distilleries-Ireland (Bheka Xhumanisa ngezansi) kaBrian Townsend nge foreward nguJohane Clement Ryan, le 22 Distilleries Galway based Ngasekupheleni kwawo-1700 lehla saba ezimbili nje nge 1822.
Lawa kwakungamadodana John uJoyce noCatherine Haurty futhi bobabili base ivaliwe 1807. ngu 1823, a Patrick uJoyce yegigi distillery ku Isiqhingi kaNuni. Wenza kahle futhi kwakhuphuka 100,000 amalitha e 1833. Nokho izinto wehla entabeni ngemva kwalokho wahamba nge 1840, kungenxa ukuqhudelana Ikota Burke sika Wemigqomo, Richard Lynch futhi Burton Persse, ababenolwazi Distilleries ezimbili (Newcastle kanye Newton Smith) okuyinto zinamandla bakwazi ukukhiqiza phezu 120,000 amalitha ngonyaka. Ngokuqhathanisa, Allmans evela ekhaya edolobheni yami Bandon bakwazi ukukhiqiza 500,000 amalitha ngonyaka zinamandla.
indodana Burton Persse sika ngithenge uJoyce distillery ezindala 1840 futhi ngemva ukuzisebenzisa iminyaka embalwa njengoba Izigayo yoboya, iguqulwe kubo emuva kulokho manje eyaziwa ngokuthi i-Nun sika Isiqhingi distillery. Yaqhubeka enjalo kuze lweMpi Enkulu nge okukhiphayo zabo “Galway Whisky” NEKUKHULUMA ngezithuba 400,000 amalitha ngonyaka. Njengoba distillery entsha wakhumula, Distilleries esikhona ezincane e Newcastle kanye Newton Smith bashiywa.
Eminyakeni ngaphambi kweMpi Enkulu, the Distilleries Dublin waqala uyangena mkhulu phakathi entshonalanga ye-Ireland futhi kwaba kulo mncintiswano okwandisa okuyinto ekugcineni ivaliwe Galway whiskey kanye kaNuni Isiqhingi distillery kube kuhle emhlabeni 1915.
Kwaphela iminyaka eminingi, Galway kuye kwaholela emisha yezokuvakasha Irish cuisine futhi manje kubonakala sengathi uMuzi Izizwe imayelana isizathu sokuba ufane nazo emisha Irish Whiskey ukuvakasha.
Garavans e Isitolo Street kuyinto yisakhiwo sodumo Galway Pub abathandwa literati Irish ezifana Samuweli Beckett. Ngaphansi kobuholi uPawulu Garavan, futhi iye yaba omunye ehamba phambili Irish Whiskey Amabha Ireland nge imenyu Amazing Irish Whiskeys futhi izingqoko yokunambitha konke okwakuhambisana phezulu kwabasebenzi super wobungane Irish Whiskey ochwepheshe eholwa ikhanda barman Brian. Ungashiyi enkantini ngaphandle kokucela ikhophi kamazisi wakhe "Izinsuku kanye Nights e Garavans" ugcwele lokuluhlaza omkhulu kusuka emlandweni enkantini esicebile.
Galway Pub Kuvele Púcán ku Forster Street kuphinde sezingenela Irish Whiskey inselele ngobubanzi esihle Irish Whiskey ngemuva bar kanye njalo Irish nogologo yokunambitha kusihlwa futhi izinkulumo phakathi nayo yonke inkathi izivakashi. izindaba zabo zakamuva futhi kujabulise iyona kwethulwa bebodwa “Kuvele Pucan” Inkulumo ka Teeling nogologo okuyinto Ngibheke phambili kokubukeza lapha emasontweni ezayo.
IrishWhiskey.com uyaziqhenya ukusekela Galway Whisky ekuvuselelweni futhi uzobe isandla ukusebenza ngezandla Galway nogologo abangane bethu ezifana Garavans, Kuvele Pucan kanye G Ihhotela ukwakha mass abagxeka Irish khona nogologo e Galway phezu ezinyangeni ezimbalwa ezizayo Nokho entsha Irish Whiskey ukuvakasha indawo yethu IrishWhiskeyway.com.
Manje, ngabe yimuphi yokudlela Galway ukuthatha up nogologo imenyu uxhaso lwethu sipho?